Vista Mon Nov 08, 04:53:00 PM GMT+8
ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်ထှာ ....မချစ်ကြည်လည်း အတော်လေးကိုကဲတာကိုးခွိ
ZZZ Mon Nov 08, 05:23:00 PM GMT+8
မချစ်ကြည်အေးရဲ့ ကျောင်းအကြောင်းတွေကိုဖတ်ရင်းနဲ. အရင်က တက်ခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ်အကြောင်းကို ပြန်လွမ်းမိတယ် ၊
ကျောင်သားဘ၀ရဲ့ ပျော်ရွင်ဖွယ်ဖြစ်ရပ်များကို ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်ပါ ...
Thant Mon Nov 08, 05:28:00 PM GMT+8
ဘွဲ့ဝတ်စုံလေးနဲ့မျက်နှာလေးကြည့်လိုက်တော့ အဲ့လောက်ကဲတယ်ဆိုတာ မထင်ရက်စရာ.....း)))
အဖြူရောင်နတ်သမီး Mon Nov 08, 06:40:00 PM GMT+8
ကျောင်းတုန်းက ဘဝလေးကို လာနားထောင်သွားတယ် မကြီးရေ...
Kay Mon Nov 08, 07:04:00 PM GMT+8
အဲဒါနဲ့..အီကိုသူက..နေ့ရွှေ့ ညရွှေ့ရင်း .. ကျောက်တုံးစာ မိသွား တော့တာပေါ့လေ.. ကွိ ကွိ..
ညီမလေး Mon Nov 08, 08:38:00 PM GMT+8
ပျော်စရာကောင်းသော လွမ်းမောစရာ နေ့ရက်တွေကို သတိရတယ် ချစ်ချစ်ရယ် ....
ပီအက်စ်းချစ်ချစ်လဲ တော်တော်ကဲခဲ့တာပဲးP
ချစ်ကြည်အေး Mon Nov 08, 09:06:00 PM GMT+8
ဘုရား ဘုရား ကိုယ့်ပေါင် ကိုယ်လှန်ထောင်းသလို ဖြစ်နေပါရောလား အို....အရှိအတိုင်းပေါ့ တတ်နိူင်ပါဘူး အဲ့တုန်းက ၁၆-၁၇-၁၈ ငယ်တုန်းကိုး...စလိုက် နောက်လိုက်နဲ့ ပျော်တတ်ခဲ့ကြတာပါလေ....:P
ဝေလင်း Mon Nov 08, 09:26:00 PM GMT+8
လေးငါးခြောက်တန်းလောက်ကတည်းက မက်ခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ်အိပ်မက် ၁၀တန်းလည်းအောင်ရော ပျက်ကရောပဲ။။ ပြောမလို့သာပြောတာပါလေ..။ ကိုယ်စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ်ဆိုတာ သစ်ပုတ်ပင်နဲ့ အဓိပတိလမ်းနဲ့မဟုတ်လား..။ တောထဲတော့ မြွေပါးကင်းပါးမသွားနိုင်ပါဘူး။ မန္တလေးရတနာပုံတက္ကသိုလ်လိုလည်း ရေတက်လာရင် လှေနဲ့ ကျောင်းတက်ရတာမျိုးဆိုရင် သိပ်တော့မမိုက်သေးဘူး...။ တက်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ အစ်မတို့ခေတ်က တက္ကသိုလ်တက်ချင်ပါတယ်အစ်မရေ...။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် အစ်မကို မနာလိုဘူးဗျာ...
ရွှေရတုမှတ်တမ်း Mon Nov 08, 10:47:00 PM GMT+8
မယ်ချစ်တို့ ရွာနားက မြက်ရှောင်ရင်း...ကျောက်တုံးခလုတ်တိုက်မိရှာလေသတည်း....ဤကား စကားချပ်...
Anonymous Mon Nov 08, 11:51:00 PM GMT+8
blackroze Tue Nov 09, 12:33:00 AM GMT+8
sonata-cantata Tue Nov 09, 12:48:00 AM GMT+8
၀မ်းဆက်လေးကို ရယ်လိုက်ရတာ ချစ်ကြည်ရယ်
T T Sweet Tue Nov 09, 12:53:00 AM GMT+8
ဟားဟား ... အကြည်တို့လဲ အတော်ဗရုပ်ကျခဲ့တာပဲ။ သူ့ထက်သူ လူစွမ်းကောင်းတွေချည်းပါပဲလားဟရို့။
အီကိုကတော့ မိန်းမလှကျွန်းဆို နာမည်ကြီးပါတယ်ဗျာ။ ဓာတ်ပုံထဲက အီကိုသူလေးတွေကလဲ ချောချောလေးတွေပါပဲ။
ဝက်ဝံလေး Tue Nov 09, 01:55:00 AM GMT+8
တော်တော်ဆိုးခဲ့တာပါ ဒါဆို များ တို့က ဆိုးခွင့်မရတာလား လိမ်မာတာလားတော့မသိဘူး ဟိဟိ ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေက ပြန်တွေးရင် ပျော်စရာကြီးနော် ဒါနဲ့ စကားမစပ် ဒီလိုရေးတော့ မချစ် အမျိုးသားကမ စ ဘူးလား နင့်အဆက်ဟောင်းကို သတိရလား ဘာလား ညာလား ဟိဟိ
P.Ti Tue Nov 09, 02:02:00 AM GMT+8
အမတို့ခေတ်က တက္ကသိုလ်က ကျွန်တော်တို့ခေတ်ထက် အများကြီးပိုပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ အကိုကလည်း အီကိုကဆိုတော့ တခါ သူ့အဆောင် ဟန်လင်းမှာ သွားအိပ်ဖူးတယ်။ အမေတို့ပြောဖူးတာရော အကိုတို့နေတာပါကြည့်ပြီး အဆောင်ကျောင်းသားဘ၀ကို အားကျခဲ့တာလေ။ အကိုနဲ့ အမချစ်ကြည်အေးတို့နဲ့တောင် အတန်းသိပ်မကွာလောက်ဘူးထင်တယ်။
အလယ်ကနှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ပါ ... :P
ကိုချစ်ဖေ Tue Nov 09, 06:52:00 AM GMT+8
အဲ့ဒီနှစ်တွေတုန်းက ဒုန်းမင်းတီးတတ်တဲ့ ပျဉ်းမနားက သူငယ်ချင်းကို ဒုန်မင်း အတင်းယူလာခိုင်း ပြီးတော့ အဆောင်မှာ အဖေတို့ခေတ်က မြန်မာသံ အချစ်သီချင်း တွေကို သေချာတိုက် အင်းလျား ရတနာကော မာလာ သိရိကော နှင်းဆီ အင်ကြင်းပါမကျန် အုပ်စုလိုက် ဒုန်းမင်းနဲ့ တယောက်တပုဒ် သွားသွားဆိုတာ ဂီတာတွေကြားထဲမှာ ဒုန်မင်းနဲ့ ထူးထူးခြားခြား မြန်မာသံဆိုတော့ လက်ဖက်တွေ လိမ္မော်သီးတွေ နေကြာစေ့ပါမကျန် တ၀ပါပဲ မဟုတ်တရုတ် ကိုဘယ်သူက ဘယ်မေဂျာသူ မဘယ်သူအတွက် ဆိုပြီး သီချင်းတွေဆို နောက်ကြ ဂီတာလေးတွေခမျာ မျက်နှာကိုငယ်ရော ဂီတာလဲ တီးတတ်ကြရဲ့သားနဲ့ လေ. ကိုချစ်ဖေကတော့ အသံကလဲမကောင်း အဆိုကလဲ မတတ်ဆိုတော့ ဒုန်မင်းကြီးတထမ်းထမ်းနဲ့ လိုက်အားပေးရတာပေါ့ဗျာ..နှစ်ဆယ်နှစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာ ကျနော်တို့ထဲက ၂ ယောက်တောထဲမှာ ကျ တယောက် ထောင်ကျ ပြည်ပြေးဖြစ် တယောက်ရဲ ဖြစ်သွားကြရော မချစ်ကြည်ရေ.
Anonymous Tue Nov 09, 01:04:00 PM GMT+8
ဒီပို့ (စ်) ကိုဖတ်ပြီးကျောင်းကို အ၇မ်းလွမ်းသွားပြီ။ ဒို့ ထက် ငယ်မယ်ထင်ပါတယ်၊ ဒို့ က ၉၆ မှာပြီးတာ။ အေ၇းအခင်းနဲ့ မကြုံခဲ့ဘူး။ သ၇ဖီမှာနေခဲ့ပါတယ်။ ပျော်စ၇ာတကယ်ကောင်းပါတယ်။
toe Tue Nov 09, 03:15:00 PM GMT+8
အားလုံးကို မြင်ဖူးသလိုလိုပဲ.. ၈၈ ဖြစ်တော့ တတိယနှစ်လား..
ဒါဆိုရင် same batch တွေဖြစ်မယ် ထင်တယ်.. ကိုယ့်အဖွဲ့လည်း (၈)ယောက် အုပ်စုပဲ.. Commerce ကို (၄) ယောက်.. Stats ကို (၃)ယောက်.. Eco ကို (၁)ယောက်.. ရောက်သွားကြတယ်.. ဒါပေမဲ့ အခုချိန်ထိ အားလုံး အဆက်အသွယ်မပြတ်ကြပါဘူး.. နိုင်ငံတွေ ခြားနေကြပေမဲ့..
မိုးငွေ့...... Tue Nov 09, 04:57:00 PM GMT+8
အမချစ်က ခုရုပ်နဲ့ ကျောင်းတုန်းကနဲ့ ဘာမှပြောင်းလဲမသွားဘူး ကြည့်ကောင်းတုန်းပဲ....။ ကျောင်းသားဘ၀အမှတ်တရလေးတွေက မေ့မရအောင်ပါပဲ ပျော်စရာလေးနော်........။ အမတို့အီကိုကပိုပျော်ဖို့ကောင်းမယ်...။
su su Tue Nov 09, 05:23:00 PM GMT+8
section 5.။၈၇ မှာ ၇၅ကျပ်တန်၊၂၅ကျပ်တန်‌တွေသိမ်း‌တော့တို့‌တွေတတိ
same batch ဆိုရင်ေ တာ့တခန်းထဲတက်ခြဲ့ကမှာဘဲ..အြံ့သစရာဘဲ..
၂၀ေ လာက်ပြန်ငယ်သွားသလိုခံစားရတယ်....လွမ်းလိုက်တာ.....
Anonymous Tue Nov 09, 05:46:00 PM GMT+8
အီကို ကတော့ အလန်းတွေ တော်တော်ကို များတယ်။ accounts & audit လဲ တော်တော် နိုင်တော့...:(
နေသွေး(ဘရာဗို) Tue Nov 09, 11:20:00 PM GMT+8
သတိတရ ထုတ်ကြည့်ဖို့ ကောင်းတာပေါ့ဗျာ
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) Wed Nov 10, 02:27:00 AM GMT+8
အချောအလှတွေပေါတဲ့ အမတို့ အီကိုက လွမ်းစရာပါ ... :P
tin min htet Wed Nov 10, 07:02:00 AM GMT+8
သနပ်ခါးတုံး လိုက်ပေးတဲ့ အခန်းက အသားပဲ။ ဒီလောက်နဲ့ပဲ တခန်းရပ်သွားသလား။ ဂျီဟောသူထဲက ဝေဝေတို့ ကဲသမျှ သူ့ကိုကြိုက်တဲ့သူ ပေါ်လာလို့ ပြေးရတာ သတိရသေးတယ်။
ချစ်ကြည်အေး Fri Nov 12, 11:11:00 PM GMT+8
စာဖတ်သူရေ အမက ၉၃မှာ ဘွဲ့ယူပါတယ်...
တိုးရေ ဟုတ်ပါတယ် ၈၈မှာ တို့တွေက တတိယနှစ် ပထမစာသင်နှစ်ဝက် ရောက်ပါပြီ...
စုရေ တို့ မှတ်မိသလောက်ကတော့ ကွင်းနာမည်က ခင်ယင်းမာ ဆိုလား။ ဟုတ်တယ် ဆရာ ပေါက်စီ အတန်း လုတက်ခဲ့ကြတာလေ။ စုနဲ့ တအုပ်စုထဲများ ဖြစ်နေမလား။ တို့လည်း ရှေ့တန်းက မိန်းကလေးတွေ ဖိနပ်ကို ထီးကောက်နဲ့ ဆွဲယူပြီး ဖွက်ဖူးတယ် ဟားဟား...
ချစ်ကြည်အေး Fri Nov 12, 11:31:00 PM GMT+8
ဗစ်စ်၊ သန့်၊ ညီမလေး၊ ဝက်ဝက်၊ ဆွိ..အဲဒါ ကဲတာမဟုတ်ရ...၊ သောင်းကျန်းသူ စာရင်းဝင်ခဲ့ရုံလေးများ...ဟားဟား :)
ကိုZ၊ နတ်သမီး၊ ပေါက် ကျေးဇူးပါ၊ ကျောင်းသားဘဝလေးကတော့ ဘယ်တော့မှ မမေ့နိူင်စရာပါလေ...
ကေ၊ ကိုကြီးကျောက် အီကိုသူ ကျောက်ခဲမှန်သွားတာ အဟုတ်ပဲ...ဟ ဟ:)
ရိုဇ့်၊ ဝေလင်း အမတို့လည်း နှစ်အနည်းငယ်မျှ မီခဲ့တာပါကွယ်...ကံတဝက် ကောင်းခဲ့တယ်ပေါ့လေ:)
အယ် အယ် သီတာ မရယ်ရက်ဘူးပေါ့ မမြင်လိုက်ရလို့ပါ၊ မြင်ရင် အော်ရယ်မှာ သေချာတယ်...:)
ပီတိ ဆက်ရေးစမ်းဘာာာ လာဖတ်ပါ့မယ်...:)
အကိုချစ်ဖေ ဒုံမင်းလက်သံ အဲလေ အနဲဆုံးတော့ ငါ့လက်ရာ ပါတယ်ကွ လို့ ပြောနိူင်ပြီပေါ့...:)
အမည်မသိ၊ ကိုနေသွေး ကော်မန့်အတွက် ကျေးဇူးပါ :)
ဟုတ်ပ ကိုအောင် ချောလဲချောတယ်၊ ပေါလဲပေါတယ်...ဟိဟိ :P
အမလေး ကိုတင်မင်းထက် ဒီလောက်နဲ့ ရပ်သွားလို့ တော်ပါသေး၊အမ ဝဋ်လည်တာပါဆို....:)
ကော်မန့်များအတွက် စာလာဖတ်သူနဲ့ ရေးဖော် သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို ကျေးဇူးပါရှင်းးး :)
ဇွန်မိုးစက် Wed Nov 17, 01:03:00 AM GMT+8
su su Thu Nov 18, 03:54:00 PM GMT+8
မချစ်‌ရေ...တို့‌တွေsame batch ဆိုတာ‌သေချာပြီ...မချစ်‌ပြောသလိုဘဲ
ခင်ယင်းမာကဆက်ရှင် ၅ ကွင်း...နှစ်စက‌တော့သူကဆက်ရှင်၆က‌လေ...